Indlu ethandekayo ye-rustic yeendwendwe ePr`Čut
Sibekwe emaphandleni phantsi kwentaba iStol, kwilali enoxolo iBreznica, imizuzu nje eli-10 ukusuka eBled lake kunye nemizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseLjubljana. Indawo yethu ethandekayo ye-rustic ifanelekile kwiqela elincinci labahlobo okanye usapho olufuna ukufumana uxolo emaphandleni kwaye lusenokufikelela ngokusondeleyo kuzo zonke iindawo zokhenketho kulo mmandla.
Eli khaya leholide linekhitshi eline-oveni kunye negumbi lokuhlala, eline-TV. Ukusuka kule ndawo kukho ukufikelela kwi-terrace yangaphandle. Phezulu kukho igumbi lokulala elibanzi elineebhedi ezi-2 kunye nebhedi enye. Sinokongeza ibhedi ye-6 ngokucela.
Igumbi lokuhlambela elineshawa lisezantsi, ecaleni kwegumbi lokuhlala.
Ilali yethu iBreznica sisiqalo esigqibeleleyo sezinto ezininzi ezimangalisayo zendalo kunye nembali umtsalane nje omfutshane: ILake Bled (imizuzu eli-10), iBled castle (imizuzu eli-12), iVintgar gorge (imizuzu eli-10), idolophu yakudala yaseRadovljica (imizuzu eyi-8) , I-Pericnik waterfall (imizuzu eyi-15), iLake Bohinj (imizuzu engama-45), ipaki yesizwe yaseTriglav (imizuzu eyi-10-45), iLjubljana Old Town (imizuzu engama-45).
Kukho iindlela ezininzi zokukhwela ibhayisekile, ukukhwela ibhayisekile entabeni kunye nokukhwela amahashe.
SinguErik noPetra kwaye sihlala ecaleni kwendlu yakho. Siya kukwamkela xa ufika kwaye sikunike izitshixo zendlu yeendwendwe zethu. Siza kukunika isithuba kodwa sisoloko sikhona xa kuyimfuneko.